भेरी अस्पतालमा अख्तियारको छापा, कम्प्युटर अपरेटरसँग कहाँबाट आयाे १६ लाख रुपैयाँ ? – Health Post Nepal
भेरी अस्पतालमा अख्तियारको छापा, कम्प्युटर अपरेटरसँग कहाँबाट आयाे १६ लाख रुपैयाँ ?
२०७७ साउन ९ गते १०:०९
कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला रहेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा अख्तियारले छापा मारेको छ।
छापा मार्ने क्रममा अस्पतालमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनाललाई १६ लाख १३ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलबाट खटिएको टोलीले कम्प्युटर अपरेटर खनाललाई उक्त रकमसहित पक्राउ गरिएको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले बताए।
प्रमुख गैरैका अनुसार विभिन्न पाटीसँग कमिसन वापतको रकम लिँदै गर्दा खनाललाई पक्राउ गरिएको हो। उक्त रकम सामान खरीदको कमिसन रहेको बुझिएको छ। प्रमुख गैरेले स्रोत नखुलेको रकमसहित कम्प्युटर अपरेटर खनाललाई पक्राउ गरिएको जनाएका छन्। उनका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
यसअघि अस्पतालमा ल्याइएको कोरोना भाइरस परीक्षण उपकरणमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अस्पतालविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। उजुरी दर्तापछि अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको र अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालले अख्तियारलाई उपलब्ध गराएका कागजपत्र सन्तोषजनक नदेखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारको टोलीले बिहीबार छापा मारेको छ।
गत असार ४ गते अख्तियारले भेरी अस्पतालमाथि प्रारम्भिक छानविन गरेको थियो। ‘अस्पतालले अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको कागजात हेर्दा छानविन टोलीको चित्त बुझ्दो सुझाव नआएपछि बिहीबार थप अनुसन्धानका लागि छापा मारेका हौं,’ अख्तियार नेपालगन्जका प्रमुख गैरैले भने।
थप अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको छ। ‘उक्त कागजपत्रमाथि विशेष छानविन गरिनेछ,’ प्रमुख गैरैले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा दोषी फेला परे तत्कालै कानूनी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।’ कोरोना भाइरस टेस्ट गर्ने मेशिन लगायत मेडिकल उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।
उनका अनुसार बायो मेडिकल इक्वीपमेन्टलगायतका मेडिकल उपकरण र औजारहरू टेण्डरबिनै खरिद गरी आर्थिक चलखेल र अनियमितता गरेको भन्दै अस्पतालविरूद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। कोभिड–१९ को निहुँमा अस्पतालले खरिद गरेका उपकरण तथा औजारहरू सरकारको खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित रहेको देखिएको छ।
अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि भेरी अस्पतालसँग उक्त उजुरीका बारे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो। अख्तियारमा उजुरी परेपछि अस्पताललाई ७ दिनको म्याद दिएर बायो मेडिकल इकुपमेन्ट लगायतका सामाग्री खरिदका कागजजात, रसिद, टेण्डर आव्हानको प्रक्रियासँग खरिद प्रक्रियाबारे स्पष्ट लिखित जवाफ पठाउन माग गरिएको थियो।